Alshabab oo Jilib Kudilay Haween Ay Ku Eedeyeen Basaasnimo +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Alshabab oo Jilib Kudilay Haween Ay Ku Eedeyeen Basaasnimo +Cod
Xarakada Al-Shabaab ayaa maanta goob fagaare ah oo kuyaala Magaalada Jilib ee Gobolka Jubada Dhaxe ,waxa ay u toogteen labo haween ah ay ku eedeeyeen in ay ahaayeen Basaasiin katirsan Ciidanka Sirdoonka Dowlada Soomaaliya.
Fagaaraha Al-Shabaab xukunka dilka ah ku fulinayeen waxaa isugu soo baxay dadweyne aad u badan kuwaa oo daawanayay sida uu u dhacay Xukunka dilka ah ay maanta Xarakada Al-Shabaab ku fuliyeen labadan Haween.
Aasiyo Cumar Hilowle oo 25 sano jir ah ayaa Xarakada Al-Shabaab waxa ay ku eedeeyeen in ay katirsaneed Ciidanka Sirdoonka Dowlada Soomaaliya, waxa ayna tilmaameen in ay kasoo qabteen Deegaanka Beerxaano.
Gabadha kale ay Al-Shabaab maanta toogeen ayaa iyana magaceeda lagu sheegay Bishaaro kuule Xasan, waxa ay Al-Shababa gabadhan iyana ku eedeeyeen in ay aheed askariyad katirsan Ciidanka Sirdoonka Dowlada Soomaaliya.
Al-Shabaab ayaa labadan haween waxa ay sheegeen in howshooda ugu weyneed ay aheed in ay xogo ka gudbiyaan koontaroolada ay Gacanta ku hayaan Dagaalyahanada Al-Shabaab iyo lacaga kasoo gala koontarooladaasi.
Deegaanada ay Al-Shabaab kataliyaan waxaa mrar kala duwan lagu toogtay rag iyo haween Soomaaliyeed, kuwaa oo ay Al-Shababa ku eedeeyeen in ay katirsan yihiin Sirdoonka Dowlada Soomaaliya iyo Dowlado kale oo shisheeye.